Izindaba - Isirinji
Isipetu yipompo ehlanganisa i-plunger eshelelayo elingana ngokuqinile eshubhuni.I-plunger ingadonswa futhi iphushwe ngaphakathi kweshubhu eliyisilinda elinembile, noma umgqomo, ukuvumela isirinji ukuthi idonse noma ikhiphe uketshezi noma igesi ngembobo ekugcineni evulekile yeshubhu.
Ingcindezi isetshenziselwa ukusebenzisa isirinji.Ivamise ukufakwa inaliti ye-hypodermic, umlomo wombhobho, noma ishubhu ukusiza ukuqondisa ukugeleza nokungena nokuphuma emgqonyeni.Imijovo yepulasitiki nelahlwayo ngokuvamile isetshenziswa ukunikeza imithi.
Isirinji yinde kangakanani?
Izinaliti ezijwayelekile ziyahlukahluka ngobude ukusuka ku-3/8 intshi ukuya ku-3-1/2 intshi.Indawo yokuphatha inquma ubude benaliti edingekayo.Ngokuvamile, lapho umjovo uqhubeka ujula, inaliti iba yinde.
Isirinji ejwayelekile inama-mL amangaki?
Amasirinji amaningi asetshenziselwa imijovo noma ukulinganisa kahle imithi yomlomo alinganiswa ngamamililitha (mL), abuye aziwe ngokuthi cc (cubic centimeters) njengoba lena kuyiyunithi evamile yemithi.Isipetu esisetshenziswa kakhulu yisirinji engu-3 mL, kodwa imijovo emincane njengo-0.5 mL futhi emikhulu njengo-50 mL nayo iyasetshenziswa.
Ngingakwazi ukusebenzisa isirinji efanayo kodwa inaliti ehlukile?
Ingabe kwamukelekile ukusebenzisa isirinji efanayo ukujova isiguli esingaphezu kwesisodwa uma ngishintsha inaliti phakathi kweziguli?Cha. Uma sezisetshenzisiwe, isirinji nenaliti kokubili kungcolile futhi kufanele kulahlwe.Sebenzisa isirinji entsha engenalutho nenaliti esigulini ngasinye.
Uwukhipha kanjani amagciwane umjovo?
Thela i-bleach engaxutshiwe (amandla aphelele, awengeziwe amanzi) enkomishini, ekepisini noma entweni ozoyisebenzisa kuphela.Gcwalisa isirinji ngokudweba i-bleach iye phezulu ngenaliti phezulu kwesirinji.Awunyakazise bese uyawucofa.Shiya i-bleach kusirinji okungenani imizuzwana engama-30.
Isikhathi sokuthumela: Jul-01-2021